I-China Graphite disk electrode yomkhiqizi we-spectrometer kawoyela Umkhiqizi kanye Nomthengisi | I-Jinglong
Ngokuqhathanisa amandla esignali wezinto ezisampulini kawoyela esetshenzisiwe naleyo yesilinganiso samazinga wokulinganisa, ukubalwa kwezinto zokuhlola kusampula kawoyela kungabalwa, futhi imiphumela yokuhlolwa ingafakwa kudathabheyisi yokuphrosesa ngemuva.
I-disk electrode ekhethekile ye-spectrometer kawoyela ibilokhu ngenqubo yokusakaza okushisa okuphezulu, iba nokufana okuhle kwe-porosity; isebenzisa ubumsulwa obuphezulu be-graphite (ubumsulwa be-spectral) njengempahla eluhlaza, enesici samandla aphakeme, ukuminyana okuphezulu, ubumsulwa obuphezulu, ukuzinza kwamakhemikhali okuphezulu, isakhiwo esinyene nesifana, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba okuphezulu, njll .; ithobela ngokuqinile amazinga we-Nb / SH / t0865 ne-ASTM D6595.
Usayizi Disc electrode: ubukhulu elingaphandle 12.5mm; imbobo yangaphakathi yomgodi: 3mm; ukuphakama: 5mm;
Incazelo ye-graphite disk electrode ye-spectrometer kawoyela:
Igama lesiNgisi: Graphite disc
Imodeli nokucaciswa: ama-PC ama-500 / ibhokisi
I-disk electrode ekhethekile ye-spectrometer kawoyela inemisebenzi emibili.
Isampula ebhokisini likawoyela liyiswa esikhaleni esiphakathi kwe-disk electrode ne-electrode yenduku ngokushintshanisa i-disc electrode;
Lapho umthombo we-arc oshintshayo uxhunyiwe, uzosabela nge-electrode yenduku ukukhiqiza ukushisa okuphezulu ngokushesha, kufuthise futhi kuhlukanise izingxenye ezikusampula kawoyela kuma-athomu anegesi, bese kuthokozisa ama-athomu anegesi ukukhiqiza ulayini wesici se-spectral sezinto.
Ubumsulwa be-electrode (ukungcola) kungenye yemithombo esemqoka yomsindo wangemuva;
Ubumsulwa be-electrode ne-porosity kuzothinta ukuzinza kwamazinga okushisa, bese kunemba nokuqina kwemiphumela;
Ububanzi obungaphandle be-disk electrode buzothinta inani lesampula eliphethwe;
Ububanzi obungaphakathi be-disk electrode buthinta izinga lokujikeleza nenani lamasampuli atholakalayo
I-electrode ekhethekile yeplate ye-spectrometer kawoyela;
Kusetshenziswa ubumsulwa obuphezulu be-graphite (ubungcwele be-spectral), obunezici zamandla aphezulu, ukuminyana okuphezulu, ubumsulwa obuphezulu, ukuqina kwamakhemikhali okuphezulu, isakhiwo esihlangene nesifana, ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nokuhamba okuphezulu;
Langaphambilini I-oxydation ukumelana ne-graphite rotor yamanzi we-degassing aluminium
Olandelayo: Zokwenziwa Graphite Iphepha / Ifilimu / Ishidi
I-graphite electrode yesitshalo sensimbi
Indandatho ye-Carbon ekhulelwe i-Antimony
Purity High Umsizi Ibhola